Ime ụlọ na n'èzí akụrụngwa - China Gormeet Plastic
Nke a na udi na-agụnye un-subdivided igbu moldings ngwaahịa, dị ka: nchekwa ụlọ a dị mfe na-ezukọta n'èzí nchekwa wụsịrị pụrụ enịm n'ebe ọ bụla n'azụ ụlọ ma ọ bụ oche ebe nchekwa na-mkpa. The n'èzí ubi nchekwa wụsịrị nwere a sloped ụlọ. Zuru okè maka na ịchekwa gị ahịhịa ngwá, sports gia, na jakị ngwá ụlọ, a wụsịrị bụ vasatail na inogide. Ịzụ ngwaahịa Site obere cabins ka nnukwu n'èzí nkịta ụlọ, anyị na-enwe dị mkpa awnings na ngwa ka mma asatọ gị perso ...
Nke a na udi na-agụnye un-subdivided igbu moldings ngwaahịa, dị ka:
Nke a dị mfe na-ezukọta n'èzí nchekwa wụsịrị pụrụ enịm n'ebe ọ bụla n'azụ ụlọ ma ọ bụ oche ebe nchekwa na-mkpa. The n'èzí ubi nchekwa wụsịrị nwere a sloped ụlọ. Zuru okè maka na ịchekwa gị ahịhịa ngwá, sports gia, na jakị ngwá ụlọ, a wụsịrị bụ vasatail na inogide.
Si obere cabins ka nnukwu n'èzí nkịta ụlọ, anyị na-enwe dị mkpa awnings na ngwa ka mma asatọ gị mkpa, hà na idụhe nke gị yad. N'agbanyeghị ụdị Pita i nwere, onye ọ bụla style nwere a dịgasị iche iche nke nha, otú i nwere ike ịchọta onye kwesịrị ekwesị nnukwu ma ọ bụ obere nkịta ụlọ gị Pita.
Otutu Pet Gear Kwụpụ na ramp awade anu ulo a nwayọọ ná mkpọda nke na-eme ka ọ dị mfe maka ha iru sofas, akwa, na ndị ọzọ. Ọ na-mere nke inogide kpụrụ plastic na-abịa na họrọ agba nhọrọ. The kapet bụ mbughari na bụ igwe keosusu. Kwara na nkasi obi na nchekwa nke gị anu ulo, mma ndụ n'ihi na gị na anọ legged enyi na-enyemaka nke Pet Gear.
Dị ka ihe ice obi, abụọ-walled mkpuchite ike elu mkpuchi. Ị nwere ike hazie size, agba, ọkpụrụkpụ nke oyi.
Aṅụ iyi plastic akụkụ, plastic ụzọ, plastic ọkpọkọ, plastic wiil, etc ..